Tsy avelan'i Amazon handositra ny Apple Watch | Avy amin'ny mac aho
Tsy avelan'i Amazon handositra ny Apple Watch
Na dia efa voamarina aza ny fivarotana ny Apple Watch ho an'ny firenena sivy, izay tsy ahitana an'i Espana, amin'ny 24 aprily, dia miasa mafy hatrany ireo mpamorona fampiharana ho azy. Androany dia mamerina izahay fa ilay maherin'ny varotra amin'ny Internet, Amazon, Tsy nisalasala mihitsy izy ny amin'ny mety ho an'ity vokatra vaovao ity sy ny fividianana izay azo atao amin'ny alàlan'ny fampiharana tsara.
Izany no antony manomboka mivezivezy amin'ny Internet fa ny mpamorona fampiharana ho an'i Amazon dia mety hamita ny famoronana ny fampiharana fiantsenana manokana ho an'ny Apple Watch. Ho hitantsika amin'ny volana ho avy raha vonona na tsia izany fampiharana izany amin'ny farany.
Betsaka ny fampahalalana efa noraisina tao amin'ny tambajotra mifandraika amin'ilay fangatahana voalaza fa hanomanan'i Amazon ireo mpampiasa an-tapitrisany izay mividy ny singa Apple Watch. Hatramin'ny 24 aprily dia afaka mividy amin'ny rafitra haingana sy haingana araka izay tratra izy ireo.
Ireo any Amazon dia efa manana fampiharana ho an'ny Android Wear ary izany no antony ahazoana antoka fa hanana mpiara-miasa aminy amin'ny famantaranandro Apple. Toa tsy nanafina na inona na inona i Amazon ary nanondro izy ireo fa miasa amin'ny fampandehanana ny fampiharana azy ireo amin'ny rafitra rehetra, koa raha raisintsika izany Ny Apple Watch no hany famantaranandro mampiasa rafitra hafa, na izany aza no iasan'izy ireo tsikelikely.
Ny tena mazava dia amidy ho "churros" ity famataranandro ity ary izany no antony raha afaka mamindra rindranasa iray mamela ny mpampiasa hividy i Amazon. hitombo toy ny sombin-javatra izy ireo amin'ny foto-kevitry ny famantaranandro mihitsy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Apple Watch » Tsy avelan'i Amazon handositra ny Apple Watch
Ahoana ny fampiasana AirPlay amin'ny iPhone na iPad
Bibikely taloha ao amin'ny fizahan-tany manokana an'ny Safari dia mbola manan-kery ao amin'ny OS X Yosemite